ခေမာ (Supermodels) - အဖွားကြီး (Old Lady) [2016 Album] (MP3 320Kbps!) - Mg Shan Lay
Home 320 Kbps! Album High Quality Htet Yan Supermodels ထက်ယံ မိစန္ဒီ သားသား ​ခေမာ ​ခေမာ (Supermodels) - အဖွားကြီး (Old Lady) [2016 Album] (MP3 320Kbps!)
​ခေမာ (Supermodels) - အဖွားကြီး (Old Lady) [2016 Album] (MP3 320Kbps!)
12:35:00 AM 320 Kbps!, Album, High Quality, Htet Yan, Supermodels, ထက်ယံ, မိစန္ဒီ, သားသား, ​ခေမာ,
သစ္စာ​ဖောက် [Feat. Mi Sandi]
Lucky Charm [Feat. Thar Thar]
အခု​ခေတ်​ပေါ် [Feat. Supermodels]
ငါ​ပြောတာကြားလား [Feat. Htet Yan]
Tags # 320 Kbps! # Album # High Quality # Htet Yan # Supermodels # ထက်ယံ # မိစန္ဒီ # သားသား # ​ခေမာ
Labels: 320 Kbps!, Album, High Quality, Htet Yan, Supermodels, ထက်ယံ, မိစန္ဒီ, သားသား, ​ခေမာ
aKu NamaTata March 4, 2016 at 10:45 AM
ဘယ်လိုဒေါင်းရမလဲကိုရှမ်းလေး ဒီAlbum ကအရမ်းမိုက်နေလို့ :) Link မတွေ့လို့အစ်ကိုရေ.....